Niorina tamin'ny taona 1999ï¼ŒFitdance factory ballet izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana akanjo fandihizana, ary manana ny lazany eo amin'ny indostrian'ny dihy sinoa sinoa. Ary kiraro fandefasana balafomanga, fanamafisana balaonina ary kojakoja hafa. Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro toa an'i Amerika Avaratra ampitan-dranomasina, Rosia, Aostralia, Kanada, Japon, Korea atsimo, sns. Ary noraisin'ireo mpanjifa tsara teto an-toerana sy tany ivelany. Misy toha-pamokarana roa any Guangdong sy Hubei, izay misy mpiasa 200. Ny mpiasanay dia misy mpamorona endrika ambony, mpitantana ary mpivarotra izay afaka miantoka serivisy avo lenta sy vokatra avo lenta. Nanomboka asa fandraharahana avy amin'ny orinasa izahay, ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena rehetra. izao tontolo izao. Tena atokisan'ny andrim-piofanana, ny matihanina ary ny mpampiasa. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny orinasa fanaovana baleta Fitdance dia nanjary marika lehibe indrindra amin'ny famokarana sy fandefasana akanjo fandihizana, ary mipoitra tsikelikely ny vinavinany sy ny sandan'ny varotra.
Miarahaba ny fahombiazana feno tamin'ny fampirantiana ny akanjo fampandehanana dihy Wuhan faha-6 sy ny fampitaovana dihy
Nanomboka ny 14 hatramin'ny 17 aprily 2021, ny Expo Wuhan Dance Costume and Dance Equipment Expo dia natao tao amin'ny Hall B5 / B6 an'ny Wuhan International Expo Center ary nifarana tamim-pahombiazana.
Izahay dia matotra amin'ny vokatra. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia andefaso mailaka izahay ary hamaly anao izahay ao anatin'ny 24 ora